Ihe Ụfọdụ I Kwesịrị Ịma Banyere Kegịstan
Ihe ndị a bụ obere ụlọ yiri ụlọikwuu. Ha dị n’ala ala ugwu Tash Rabat
KEGỊSTAN dị n’etiti Eshia. Ọtụtụ ugwu gbara ya gburugburu, snoo na-ekpuchikarịkwa ugwu ndị ahụ. Obodo ndị gbara ya gburugburu bụ Kazakstan, Uzbekịstan, Tajikistan, na Chaịna. Kegịstan bụ nnọọ ugwu ugwu. Ọ dị n’elu elu otu ugwu a na-akpọ Tian Shan. Ugwu a dị n’ọtụtụ obodo dị n’Eshia. Ọhịa adịchaghị n’obodo a. Ma, otu ihe pụrụ iche bụ na ụkpa juru n’ọhịa ndị nke dị na ya. O so n’obodo ndị ụkpa hiri nne na ha.
Ndịàmà Jehova na-amụrụ ọtụtụ puku ndị bi na Kegịstan Baịbụl
Ihe e ji mara ndị Kegịstan bụ na ha na-anabata mmadụ nke ọma, na-akwanyekwara mmadụ ùgwù. Ha na-akwanyere onye tọrọ ha ùgwù ma ha gwawa ya okwu. Ha na-ebiliri ya n’oche, na-ahapụkwara ya oche kacha mma.
Ndị obodo ahụ na-amụ ụmụ atọ ma ọ bụ karịa. Nwa ha nwoke nke ọdụdụ na nne ya na nna ya na-ebikarị, ma ọ̀ lụrụ nwaanyị ma ọ lụghị. Ọ bụkwa ya ga-ele ha nká.
Ha na-ebido mgbe nwa ha nwaanyị ka dị obere kụziwere ya otú nwaanyị kwesịrị isi na-arụ ọrụ n’ụlọ. Mgbe nwa ahụ na-erule afọ iri na ise, o nweghị ọrụ nwaanyị na-arụ n’ụlọ ọ na-agaghị ama otú e si arụ ya. Ọ lawa di, a na-edu ya ụlọ. Ihe ụfọdụ ha nwere ike inye ya bụ ákwà dị iche iche, ma ndị nke e ji ehi ụra, ma ndị nke a na-eyi eyi, nakwa kapet ndị e ji aka kpaa. Di na-alụ ya nwere ike iji ego ma ọ bụ anụmanụ kwụọ ụgwọ isi ya.
Ha na-egbukarị atụrụ ma ọ bụ ịnyịnya ma ha liwe ozu ma ọ bụ mewe ememme ndị ọzọ. Ha na-eke anụ ya, mpaghara nke ọ bụla nwere onye a na-ekenye ya. A na-esi n’onye nke tọchara ma ọ bụkwanụ onye nke ọkwá ya kacha kere gbadawa n’ihi otú ha na-esi akwanyere mmadụ ùgwù. Ha na-erikwa nri ha na-akpọ beshbamak n’ememme ha. Ọ bụ aka ka ha na-eji eri ya.
Ha na-akpọ ihe a Komuz. Ha na-ejikarị ya akpọ egwú
Ndịàmà Jehova na-ebipụta akwụkwọ bụ́ Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị? n’asụsụ Kejiz. Akwụkwọ a dịkwa na www.jw.org/ig
Mmadụ ole bi na ya: 5,776,000
Isi obodo ya: Bishkek
Asụsụ ndị ha na-asụ: Kejiz na Rọshịan
Ihe ndị ha na-eresị ndị mba ọzọ: Ogho, owu, ọlaedo, mekuri, na yurenịọm
Okpukpe: E kee ndị obodo a ụzọ iri, ụzọ asatọ na-ekpe Alakụba
mailto:?body=Mgbe M Gara Kegịstan%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102016130%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Mgbe M Gara Kegịstan